ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကမ္ဘာတလွှား မြို့ပြညများ
(ရန်ကုန်၊ မြန်မာ) အဲ.. presentation လုပ်နေတုန်း မီးပျက်သွားတာ ဟိဟိ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အီးမေးလ် ပို့လိုက်တာမှာ သူ့ အိုင်ဒီယာကို သဘောကျလို့ ထပ်ဆင့် တင်ပြလိုက်တာပါရှင်
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 2:51 AM
ကောင်းခန်းရောက်မှပဲနော် ဒီမီးတော်တော်ဆိုးတယ်။ ရှုခင်းတွေတအားလှတာပဲအစ်မရယ်။
မီးပျက်တာများ လွယ်လွယ်လေး. နွားခြောက်ကောင်နဲ့ ဆွဲလှည့်လေ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဆူဆီနဲ့ မီးစက်နိုး...